को हुन् धनगढी बम विस्फोटमा ज्यान गुमाउने सिंह? - Everest Dainik - News from Nepal
को हुन् धनगढी बम विस्फोटमा ज्यान गुमाउने सिंह?
कैलाली, सावन ३ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–४ शहीद गेटस्थित निलम होटलमा भएको बम विस्फोटमा परी घाइते बझाङ घर भएका राम सिंहको मृत्यु भएको छ ।
घाइते राम सिंहको माया मेट्रो अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहीबार राति ११ बजेतिर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका १ नौरा स्थायी घर भएका सिंह हाल कञ्चनपुरमा बस्दै आएको खुलेको छ ।
याे पनि पढ्नुस धनगढी विस्फोट अपडेटः घाइते एक जनाको ज्यान गयो
ट्याग्स: Dhangadhi bom blast, Ram singh